Misesy ireo toe-javatry ny andro farany
"Fa hianareo, ry rahalahy, tsy ao amin'ny maizina, mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany." - 1 Tes. 5:4.
Naseho ahy fa tsy hiala ao amin'ny efitra masina indrindra i Jesôsy raha tsy efa tapaka ny anjaran'ny rehetra, ho amin'ny famonjena na ho amin'ny fandringanana; tsy hianjera ny fahatezeran'Andriamanitra raha tsy efa mahavita ny asany ao amin'ny fitoerana masina indrindra i Jesôsy ka manaisotra ny fitafiana maha-mpisoronabe Azy ary nanao ny akanjo famaliana. Rehefa izay dia tsy hanelanelana eo amin'ny Ray sy ny olombelona intsony Izy, tsy hangina intsony Andriamanitra fa hampidina ny fahatezerany amin'ireo izay nandà ny fahamarinana.
Naseho ahy fa miavaka tsara ny fahatezeran'ny firenena maro sy ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra ary ny fotoana fitsarana ny maty, nifanesy izany. Naseho ahy fa tsy mbola nitsangana i Mikaela, ary tsy mbola nanomboka ny androm-pahoriana lehibe tsy mbola nisy toa azy. Ny firenena maro no tezitra ankehitriny, rehefa vita kosa ny asan'ny Mpisoronabe ao amin'ny fitoerana masina, dia hitsangana Izy ka hanao ny akanjo famaliana, amin'izany no hirotsahan'ireo loza fito farany. Naseho ahy fa mihazona ny rivotra efatry ny lanitra ireo anjely mandra-pahavita ny asan'i Jesôsy ao amin'ny fitoerana masina, rehefa izay dia ho tonga ny Ioza fito farany. Nampirehitra ny fahatezeran'ny ratsy fanahy tamin'ny olo-marina ireo Ioza ireo, noheveriny fa isika no nampilatsaka ny fitsaran'Andriamanitra ho aminy ka hitsahatra izany loza izany raha fongorina tsy ho eto amin'ny tany isika. Avoaka ny didy fampamonoana ny olona masina, nampitomany azy andro aman'alina izany raha nangataka fanafahana izy ireo. Izany no androm-pahorian'i Jakôba. Rehefa izany dia nitalaho tamin'Andriamanitra ireo olona masina tao anatin'ny tebitebiny ka nanafaka azy ireo tamin'ny feony mahery Izy.
Talohan'ny nanomboana ny Mpamonjy tamin'ny hazo fijaliana, dia nanazava tamin'ny mpianany Izy fa tsy maintsy hovonoina ka hitsangana avy ao am-pasana (...) Nefa nanantena fahafahana ara-nofo avy amin'ny ziogan'ny Rômanina ny mpianatra, ka tsy zakan'ny eritreriny izany hoe Ilay fototry ny fanantenany rehetra no hiharan'ny fahafatesana mahafabaraka. (...) Toy izany koa: aseho eo anoloantsika ao amin'ny faminaniana ny hoavy amin'ny fomba mazava tahaka ny nanokafan'ny tenin'i Kristy izany teo amin'ny mpianatra. Aseho miharihary ireo toe-javatra mifandray amin'ny fiafaran'ny androm-pahasoavana sy ny asa fiomanana ho amin'ny androm-pahoriana. Nefa marobe no tsy mahafantatra ireny fahamarinana lehibe ireny toy ny tsy mbola nambara na oviana na oviana izany.-HM, t. 620.